Makanzuru Oshorerwa Kutadza Kushandisa Mari dzeZinara Zviri paMwero
Mari yekugadzira migwagwa iri kubva kuZimbabwe National Road Authority, kana kuti Zinara, inonzi haisi kushandiswa nemazvo uye zvinoratidza kuti makanzuru ematunhu haasi kutevedzera mitemo apo anotsvaga makambani anogadzira migwagwa pachishandiswa mari dzinobva kuZinara.
Izvi zvabuda apo komiti yeparamende inoona nezvemigwagwa yange iri kubvunzurudza makanzuru eGutu, Umguza neZibagwe pamusoro pemashandisiro ari kuita mari inobva kuZinara.
Mukuru wekanzuru yeUmguza, VaCollen Moyo, vatadza kutsanangura kuti sei kambani yeNotify yakapihwa basa yakabhadharwa madhora mazana masere ezviuru semari yekugadzira migwagwa nekanzuru iyi asi kambani iyi ichitadza kupedza basa rayakabhadharirwa.
VaMoyo vabvuma kuti havana ruzivo rwekuti kambani iyi yakasarudzwa sei vakati ivo pachavo havasi kufara nemashandiro ekambani iyi.
Vati kunyange hazvo kambani iyi yainge yati ine mahofisi muBulawayo apo yakapihwa basa, ongororo yavakazoita vave kunetsana nekambani iyi yakaratidza kuti kambani iyi ine mahofisi muHarare, uye pari zvino haichapindura zvichemo zvavo.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzaratidza kusafara nekuti kanzuru iyi yakapa mvumo yekuti Zinara ibhadhare kambani iyi asi iyo isiri kufara nebasa rakaitwa.
Vaimbove mukuru wekanzuru yeGutu, VaAlexander Mutembwa, vatiwo kambani yeFramers yakapihwa mvumo yekugadzira migwagwa zviri kunze kwemutemo uye vati vakakwidza nyaya iyi kwamudzviti nevakuru vemubazi rezvematunhu avo vakati sachigaro wekanzuru iyi, VaDaniel Jingwa, vanofanira kurangwa.
VaMutembwa vabvumawo kuti kambani iyi yakapa kanzuru yekwagutu motokori mbiri zvichitevera kupihwa basa kwayakaita.
Nhengo dzekomiti yeparamende dzatiwo ichi chihoko muhomwe uye dzakurudzira kanzuru iyi kuti itevedzere mutemo pakutsvaga makambani anogadzira migwagwa.
Mukuru wekanzuru yeZibagwe, VaFarayi Machaya, vatadzawo kutsangangura kuti kanzuru yavo iri kufambisa sei mari dzinobva kuZinara.
Vange vakasanobata chinzvimbo chasachigaro wekomiti iyi, VaAlbert Mhlanga, vati zviri pachena kuti mari yekugadzira migwagwa iri kushandiswa zvisina maturo uye makambani ari kungopihwa mari pasina basa raaita izvo zvinoita kuti migwagwa irambe yakashata.
Imwe ongororo ichangobva kuitwa nekomiti iyi, inoratidzawo kuti mamwe makanzuru ari kupota achishandisa mari yekugadzira migwagwa kutambirisa vashandi.
Vazhinji munyika havasi kufara nemari yavanobhadhariswa pama tollgates vachiti havana chavari kuona chiri kuitwa nemari iyi.
Vakawanda vanoti mari dzavanobvisa dzinofanirwa kushandiswa mukugadzirisa migwagwa kuitira kuti tsaona dziite shoma munyika.